Fanokafana ny taom-pambolen-kazo 2021 aty amin’ny Faritra Atsimo-Andrefana – Valala
Mamboly hazo anio, rahampitso manan-kialofana
Tao Sakaraha no nanombohana tamin’ny fomba ofisialy ny taom-pambolen-kazo 2021 eto @ Faritra Atsimo Andrefana, ny 22 Janoary 2021 lasa teo. Zanakazo miisa 250.000 fototra no novolena nandritra io fotoana io, mba hamerenana indray ny ala maitso.
Ho fitondrana ny anjara biriky hoan’ny firenena dia nandray anjara tamin’izany hetsika izany ihany koa ny teto anivon’ny Ivotoerana, niarahana tamin’ny Tale Jeneraly sy ny Talen’ny Fandraharahana sy ny Vola. Tonga navitrika ihany koa ireo rantsamandraikan’ny Ministeran‘ny Fambolena, Fiompiana ary ny Jono (MAEP) aty Atsimo Andrefana nahitana ny DRAEP, FDA, PRIASO sy PEPBM izay niara-nisalahy ary hita taratra ny firaisankina sy ny fiaraha-mientan’ny rehetra hamboly hazo.
Izao hetsika izao dia natao ho fitsinjovana ny taranaka fara-mandimby noho ny fiovaovan’ny toetrandro ateraky ny doro-tanety sy doro ala. « Hamboly hazo ho lovain-jafy isika fa tsy handoro ala hampahory ny mpiara-belona »
Cérémonie de passation de service du Directeur Technique sortant et entrant